Shiinaha Sida loo kala saaro oo loo isticmaalo dharka go'doominta iyo dharka ilaalinta caafimaadka Daawada iyo Warshadaha | Zhongmaohua
Sida loo kala saaro oo loo isticmaalo dharka go'doominta iyo dharka kahortagga caafimaad
Waa maxay farqiga iyo isticmaalka dharka go'doominta iyo dharka ilaalinta caafimaadka inta badan in dharka ilaalinta caafimaadku ay ka cimri dheer yihiin dharka go'doominta, oo leh heer ilaalin sareeya iyo waxqabadka ilaalin wanaagsan. Marka lagu daro buuxinta shuruudaha xirashada xoogga sare iyo iska caabinta sare, labada ayaa inta badan kala duwan sababao kala duwan oo ujeedooyin ilaalin ah iyo mabaadii'da ilaalinta.
Sida loo kala sooco dharka go'doominta iyo dharka kahortagga caafimaad
In kasta oo dharka ilaalinta caafimaadku ay ka fiican yihiin dharka go'doonka, laakiin qiimuhu aad ayuu u sarreeyaa, sidaa darteed shaqooyinka kala duwan, doorashada dharka ilaalin ayaa ka duwanaan doona. Farqiga u dhexeeya astaamaha dharka difaaca caafimaadka iyo dharka karantiimada.
Dharka ilaalinta caafimaadka
Dharka ilaalinteeda ayaa shaqeysa iyo isticmaalkeeda
Dharka difaaca ee caafimaadku waa qalabka kahortagga caafimaad ee ay xidhaan shaqaalaha caafimaadka kiliinikada markay la xiriiraan bukaannada qaba cudurada faafa. Dharka go'doominta waa qalab ilaalin ah oo ay adeegsadaan shaqaalaha caafimaadka si looga fogaado faddaraadda dhiigga, dareeraha jidhka iyo waxyaabaha kale ee la is qaadsiiyo, ama in laga ilaaliyo bukaanka infekshanka.
Tilmaamaha isticmaaleyaasha kala duwan
1. Markii aad la xiriireyso bukaanada qaba cudurada faafa ee lagusoo gudbiyo, sida bukaanka qaba cudurada faafa, bukaanka qaba cudurada badan ee daawada u adkeysta bakteeriyada, iwm.
2. Go'doomin ka difaaca bukaanka, sida ogaanshaha iyo daaweynta bukaanka leh gubasho ballaaran iyo bukaannada qaba lafaha lafaha.
3. Marka bukaanka lagu tuuri karo dhiig, dheecaannada jirka, dheecaanka iyo saxarada.
4. Galitaanka waaxaha muhiimka ah sida ICU, NICU, waardiyeyaasha, iwm., Ama ha gashanin dharka go'doominta, waa in lagu saleeyaa ujeeddada shaqaalaha caafimaadka ee gelitaanka iyo la xiriirka bukaanka, iyo xeerar gudaha oo ku filan.
Xiro dhar ilaalin caafimaad:
Markii loo soo bandhigo bukaanka hawada ku jira iyo kuwa buka ee cudurada faafa, waxaa ku dhici kara dhiigga bukaanka, dareeraha jirka, dheecaanka, iyo saxarada.
Adeegsiga kala duwan ee dharka kahortagga
Dharka difaaca ee caafimaadku waa in laga hortago in shaqaalaha caafimaadku qaadsiinin. Waxay ka kooban tahay go'doomin hal mar ah oo badanaa lagu bartilmaameedsado shaqaalaha caafimaadka; iyo dharka go'doominta ah waa in laga hortago shaqaalaha caafimaadka in cudurka haleelo ama ay wasakhoobaan iyo in laga hortago bukaanka in uusan cudurka qaadin.
Faa'iidooyinka dharka kahortagga caafimaadka ee dharka go'doominta
1. Dharka ilaalin kara caafimaadku sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabka ilaalinta caafimaadka. Shuruuddeeda aasaasiga ah waa in la joojiyo maaddooyinka waxyeellada leh sida fayraska iyo bakteeriyada, si looga ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka infekshinka inta lagu jiro baaritaanka iyo daryeelka.
2. Dharka ka ilaaliya caafimaadku waa inuu sidoo kale buuxiyaa shuruudaha shaqada ee caadiga ah ee loo adeegsado, oo leh xirasho fiican iyo badbaado, sida uumiga ka fiican kan firfircoonaanta, jilitaanka ololka ololka iyo iska caabinta aalkolada.
3. Dharka ka ilaaliya caafimaadku wuxuu leeyahay astaamaha shaqada kahortagga nugul, neefsashada wanaagsan, xoogga sare iyo caabbinta sare ee cadaadiska hawadda. Waxaa badanaa lagu isticmaalaa warshadaha, elektiroonigga, caafimaadka, kiimikada iyo bay'ada ka hortagga infekshinka bakteeriyada.
Qodob kale ayaa waliba ka duwan. Kuwa bixiya cisbitaalada markii ay codsadaan gobolka waxay u baahan yihiin “rukhsad diiwaangelin caafimaad”, sidaa darteed dhammaan dharka ilaalinta caafimaadka waa in la caddeeyaa, dharka go'itaanka guud ahaana waxaa lagu isticmaalaa xoolaha, sheybaarada, iwm. Qof walba waa inuu fiiro gaar ah siiyaa kuwa aan haysan shahaadadu waxay samayn kartaa oo keliya tijaabinta dharka go'doonka ah mana bixin karto cisbitaalka.